Sunita Dulal - दम छ दोहोरीमा - सुनिता दुलाल
दम छ दोहोरीमा
Published on: शुक्रवार
Date: Thursday, 23 August 2012
बिहीबार, ७ भाद्र २०६९
Category: अन्तरंग – Page 5
उहिले गाइने लोकभाका र अहिले गाइने लोकभाकामा आकाश जमिनको फरक छ । पहिले गाइने लोकभाकामा भीर, पाखापखेरामा लुकेर रहेको संगित गुन्जन्थ्यो । त्यो गीतले सम्पूर्ण समाजको रेखाचित्र प्रस्तुत गर्ने क्षमता राख्थ्यो । तर, गीत संगितमा भित्रिएको आधुनिकीकरण सँगै त्यो मौलिकताले पनि काँचुली फेरेको छ । संगित र भाका संकलन गर्न कुनाकन्दरा पुग्ने पहिलेका स्रष्टाको तुलना अहिलेको बियर बारमा बसेर संगित सृजना गर्ने ‘सुविधाभोगी’ संकलकसँग गर्न सकिन्न । त्यसैले त लोकभाका, लोकधुन र लोकगीतमा विचलन आएको छ । ‘पानको पात’, ‘रेसम फिरिरी’ लगायत भाका बन्दा अहिले पनि नाच्न तम्सने युवाको खडेरी छैन हाम्रो समाजमा । यद्यपि अहिले बज्ने लोकभाकालाई भने कर्कश गीत भनेर हेय भावना राख्ने थुप्रै भेटिन्छन । नेपाली लोक र आधुनिक गीत गाएर अहिले चर्चामा रहेकी गायिका हुन, सुनिता दुलाल । उनले लोकगीतलाइइ किन प्राथमिकता दिइन त ? स्वरुप आचार्यले उनीसंग गरेको अन्तरंग कुराकानी :
के गर्दै हुनुहुन्छ हिजोआज ?
अहिले तीजले छोएको छ । विभिन्न ठाउँमा हुने सांगीतिक कार्यक्रमबाट बोलावट आएको छ । त्यसलाई फाइनलाइज गर्दै छु । दिल्ली, कुवेत र युके जाने फाइनल भइसकेको छ । अन्यत्र पनि कहाँ कहाँ, के–के गर्ने प्लानिङ गर्दैछु । तीजकै लागि नयाँ एल्बम ‘मेरो हजुर’ पनि बजारमा ल्याएकी छु । यस्तै लोक आधुनिक एल्बम ‘शिरमा फुल’ को प्रमोसनमा पनि व्यस्त छु ।
कस्तो छ त लोक गीतको अहिलेको मार्केट ?
राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ । अधुनिकीकरणले धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ । थुप्रै नयाँ–नयाँ गायकगायिका उदाएका छन् । डिजिटल टेक्नोलोजीले गीत संगितको क्वालिटी बढेको छ । तर, त्यसका साथसाथै पाइरेसीले गायकगायिकालाई हत्तु बनाएको छ । तपाईलाई गीत–संगित क्षेत्रमा केले तान्यो ?
मेरो घर सिन्धुपालचोक, जलवीरे हो । मैले एसएलसीसम्म त्यहीँ पढेकी हुँ । मलाई बच्चैदेखि गीत–संगित मन पर्थ्यो । नाच्न पनि मन पर्थ्यो । स्कुलमा हुने हरेक कार्यक्रममा म भाग लिने लिन्थेँ । प्रायः प्रथम नै हुन्थे । कोर्समा पनि अरुणा लामाका बारेमा पढ्नुपर्थ्यो । रेडियोमा अरुणा लामाको गीत धेरै सुन्थेँ । मलाई पनि उहाँजस्तै गीत गाउने इच्छा पलाएको थियो । म गायिका नै हुनुपर्छ भन्ने परेको थियो ।
कसरी प्रवेश गर्नुभयो त ?
एसएलसी पछि पढाइलाई निरन्तरता दिन काठमाडौँ आएँ । पद्मकन्या कलेजमा संगित विषय लिएर पढ्न थालेँ । एङकरिङ ट्रेनिङ लिएँ । त्यसपछि इसिआर एफएममा एङकरिङ गर्न थालेँ । स्कुलमा पढाउँथे पनि । पछि मलाई कृष्णा फिल्म्सले नेपाल टेलिभिजनबाट आउने कार्यक्रम सुसेलीमा कार्यक्रम प्रस्तोता हुन अफर गर्यो । अनि मैले पढाउन छोडेँ । इसिआरबाट स्टार एफएममा आएँ । मलाई गायिका बन्न मन थियो तर पहिले सञ्चारकर्मी बनेँ । लोकगितकै कार्यक्रम चलाउने भएकाले आधुनिक भन्दा त्यो बेला लोकगीतप्रति नै लगाव बढ्न थाल्यो । त्यो बेला गाउन रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गर्नुपर्थ्यो । त्यहाबाट स्वर परीक्षा पास गरेँ । त्यसपछि मैले र एक जना गोरखाको साथी मिलेर लोकगीत एल्बम रेर्कड गरायौँ, ‘मायालुको झल्को दिइरहने’ । यसलाई धौलागिरी क्यासेटले एकमुस्ट पैसा दिएर किन्यो । तर, त्यो एल्बमले मलाई खासै चिनाएन ।
अनि कुन गीतबाट तपाई हिट हुनुभयो त ?
मलाई हिट तीजको गीतले गरायो । ‘चेलीको माइतीघर’ एल्बमको ‘आमाले पकाको मिठो दर खानलाई, फुरफर परी बसिराछु माइत जानलाई’ भन्ने गीतले मलाई रातारात हिट बनायो । यो एकदमै चल्यो । मलाई विशेष रुपले चिनाएको तीज गीत नै हो । पछिल्ले समयमा आएर मेरो दोहोरी र लोक आधुनिक पनि मन पराईदिनुभएको छ श्रोताहरुले ।
नेपाल र नेपालबाहिर पनि दोहोरी गीतको मार्केट एकदम राम्रो छ हगि ?
दोहोरी मात्र हैन, सबै गीत–संगितको मार्केट राम्रो छ । सबै गीतलाई राम्रो तरिकाले प्रिजेन्ट गर्न सकियो भने दोहोरी मात्र हैन, सबै गित चल्छन् । तर, अरु गीतभन्दा नेपालमा दोहोरी क्रेज छ ।
हिजोआज दोहोरी गीतमा थुप्रै विकृति आएका छन् । जो पनि गायक बनेर निस्केका छन…
त्यो सत्य हो । अहिले अर्काको भ्वाइसमा रेकर्ड गराएर आफ्नो नाम राखेर निकाल्ने चलन बढेको छ । आफ खालि भिडियोमा मुख हल्लाउँदै उभिने । कुनै पनि क्षेत्रको समस्या भनेको त्यसको उन्नतिसँगै आउने त्यसको विसंगति हो ।
भनेपछि लोकदोहोरीले पहिलाको जस्तो आफ्नो मिठास कायम राख्न नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ ?
हो । दोहोरीको नाममा विकृति र अश्लीलता भित्रिएकै हो । हामीले त्यो स्विकार्नैपर्छ र त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । अहिले जोसँग पैसा छ, त्यसैले एल्बम निकाल्ने पारिपाटी विकसित भएको छ । अहिले कुन कुन गीत के हो भनेरै छुट्याउन पनि गाह्रो हुन थालेका छ । कुन गीत तीजको गीत हो, कुन रत्यौली हो, कुन दोहोरी, थाहै हुन्न ।
तपाई मान्छे हेर्दा त रक आर्टिस्टजस्तो देखिनुहुन्छ । लोकदोहोरी गाउनु हुन्छ ?
लोकदोहोरी गाउने भन्दैमा सधै गुन्यूचोली वा सारी नै लगाउनु पर्छ भन्ने त छैन नि । आफूलाई कम्फरटेबल हुने लुगा लगाउने हो । तर, मलाई सारी लगाएको सुहाउँछ भन्छन् धेरैले । मलाई पनि म सारीमै राम्री देखिन्छुजस्तो लाग्छ ।
ग्ल्यामरस कि राम्रीमात्र ?
कति देखाए ग्ल्यामरस हुन्छ, कति छोपे ग्ल्यामरस हुन्छ, मलाई थाहा छैन । मेरो चाहिँ सोवर टाइपको लुक आउँछ । पूर्ण गृहिणीजस्तो ।
केटीले त हैन केटाले भन्लान त्यस्तो ?
हैन, दुबैले भन्छन् ।
तपाईको बिहे गर्ने बेला भयो कि भएन ?
छैन । अझै एकदुई वर्षपछि मात्र हुन्छ ।
कोमल वलीको झै भोलि–भोलि भन्दा उमेर जाला नि ?
जाँदैन । म कोमल दिदीको उमेरको हैन नि । मेरो उमेर नै भएको छैन, बिहे गर्ने उमेर बल्ल आउदै छ ।
बिहे गर्ने सोच भएपछि चक्कर सक्कर पनि होला नि ?
त्यस्तो छैन । अहिलेसम्म बिहे गर्न मन लाग्ने गरी कोही मन परेको छैन ।
भनेपछि कोहि केही हदसम्म मन परेको थियो ?
त्यो त भइहाल्छ नि । त्यो सामान्य हो । प्रस्तावहरु आउँछन् । तर, फोकस करिअरतिरै छ । फुर्सद नै छैन ।
त्यति धेरै टाइम चाहिदैन नि ?
किन नचाहिनु नि ? भेट्नु पर्यो । घुम्न जानै पर्यो, कफी खानैपर्यो । त्यो सबे फुर्सद छैन मसँग ।
फ्युचर प्लान के त ?
म अहिले जेजस्तो अवस्थामा छु, खुसी छु । यसैलाई निरन्तरता दिन्छु । र, लोक–आधुनिक गीत गाउँछु । त्यही हो ।
lok dohori, nepali songs, shukrabar, sunita dulal, teej song	23 August 2012 1,841 views